सेक्स टेप प्रकरणमा करिम बेन्जेमा अदालतमा तानिँदै – Gandaki Voice
नेपाल स्टार : ‘पोखराले जित्छ, एलीनाले जित्छिन्’
कस्तो अचम्म : मण्डपबाट बेहुला भागेपछि बेहुलाका बाबुले गरे विवाह
त्रिविमा बेथितिः तलबमा वार्षिक चार अर्बभन्दा बढी खर्च
घरेलु टिप्स : अनुहार र छालाको चमक बढाउने ८ उपाय
मर्न तयार छु तर केपी ओलीसंग झुक्दिन : प्रचण्ड
कोको बीचको ‘लोकल मार्केट’ मा दर्शकको चासो
जनजागरण टोल विकास संस्थाको अध्यक्षमा देवी थापा
आगोले नै निभायो यसरी आगो
Home/खेलकुद/सेक्स टेप प्रकरणमा करिम बेन्जेमा अदालतमा तानिँदै
सेक्स टेप प्रकरणमा करिम बेन्जेमा अदालतमा तानिँदै
पोखरा, २४ पुस ।
माथेयु भालबुएना सेक्स टेप प्रकरणमा रियल म्याड्रिडका स्टार करिम बेन्जेमाले अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्ने भएको छ । बेन्जेमामाथि पाँच वर्षअघि फ्रान्सका समकक्षी भाल्बुएनाको सेक्स टेप लिएर ब्ल्याकमेलिङ गर्दै पैसा अशुल्न खोजेको आरोप छ ।
एएफपीका अनुसार बेन्जेमालाई भर्साइल्सका प्रासिक्युटर अफिसले उनको मुद्दा अदालतमा लगिने जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, कुन मितिमा भने खुलाइएको छैन ।
यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि बेन्जेमाका वकिलले ब्ल्याकमेलिङको आरोप लगाएर आफ्नो क्लाइन्टमाथि षडयनत्र भइरहेको दाबी गरे ।
ईएफई न्युज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘उनीविरुद्ध मुद्दा चालउने निर्णय अनुचित छ । यस मुद्दामा बेन्जेमाले लाज मान्नुपर्ने केही कुरा छैन ।’ भाल्बुएनाका वकिल पाउल अल्बर्ट इविन्सले भने यो मुद्दा जायज भएको जिकिर गरे ।
उता, बेन्जेमाले पनि पटक-पटक यस विषयमा स्पष्टिकरण दिँदै आएका छन् । उनले भाल्बुएनाले आफूलाई यस मुद्दामा जबरजस्ती तानेको आरोप लगाएका छन् ।
बेन्जेमाले यस प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको बताए पनि यही प्रकरणका कारण उनलाई फ्रान्सको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा समावेश गर्न छाडिएको छ ।
रियल म्याड्रिडमा उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी राखे पनि ३३ वर्षीय खेलाडीले फ्रान्सका लागि सन् २०१५ को नोभेम्बर यता कुनै पनि खेल खेलेका छैनन् । त्यसअघि उनले फ्रान्सका लागि ८१ खेल खेलेका थिए ।
यता रियलका लागि बेन्जेमाले ५३३ खेलमा २६१ गोल गरिसकेका छन् । रोनाल्डोले स्यान्टियागो बर्नेबाउ छाडेपछि बेन्जेमाले सन् २०१९-२० सिजनमा रियललाई ला लिगा उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।-एजेन्सी
आज सुनको मूल्य कति ?
हेलिकप्टर नेपालमै छाडेर किन भागे चालकहरु ?
फेवातालमा पुम्दीभुम्दीका परियारको शव भेटियो